DeltaFosB နျူကလိယ၌အလွန်အကျွံဖိအားပေးခြင်းသည်ဆီးရီးယား Hamsters အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များတိုးပွားစေခြင်း (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေ
comments: ΔFosBစှဲပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB တစ်ခုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူပတျသကျ။ block မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့်စွဲတာတွေရပ်စဲ။ ဒီနေရာတွင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB တိုးပွါး, ထိုဆုလာဘ်စင်တာလွယ်စေပါတယ်ကြောင်းပြသနေသည်။ အသိမြှလှုပ်ရှားမှုကိုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်စေသည် dopamine တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားလွှတ်ပေးရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အနှစ်သာရလိင်အတွက်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းမျိုးရိုးဗီဇသာမန်အဆင့်ဆင့်အထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးလိင်၏အကြိုးရှုထောင့်တိုးမြှင့်ပေးသောမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB, တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအကြောင်းမရှိ၏သာမန်အဆင့်ဆင့်အထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB တစ်ဦးမြင့်တက်သုံးနိုငျသလဲ အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏စွဲလမ်းနှင့် rewiring ဤခဲမလား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။
FULL ဆန်းစစ်ချက်: အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားခုနှစ်တွင်နျူကလီးယပ် Accumbens Enhancer လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေးခုနှစ်တွင်ΔFosB Overexpression
မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2009 ဇွန်လ; 8 (4): 442-449 ။ Doi: 10.1111 / j.1601-183X.2009.00491.x ။
VL Hedges, 1 အက်စ် Chakravarty,2EJ Nestler,2နှင့် RL Meisel1
နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) တွင်အာရုံကြော plasticity တစ်ပုံစံဖြင့်လိုက်ပါသွားမြဲအပြုအမူကိုပြောင်းလဲအတွက် mesolimbic dopamine စနစ်ကရလဒ်များထပ်ခါတစ်လဲလဲ activation ။ အဆိုပါကူးယူအချက်ΔFosBများစုစည်းနေခြင်းကဤ plasticity ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအတွက်ဖြေရှင်းမေးခွန်းΔFosBအမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုပေးသောအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားရင်တော့မှားမယ်အထီးဟမ်းစတား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှင့်အတူတိုးပွားလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင်အများအပြားအမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲပြကြောင်းပြသနှင့် psychomotor စိတ်ကြွဆေး (ဥပမာ, စိတ်ကြွဆေး) မှတုန့်ပြန်မြှင့်တင်ရန်ပါပြီ။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားများ၏ NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏အာရုံစူးစိုက်ပါလျှင်ΔFosB၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ overexpression အဆုံးအဖြတ်ဖွငျ့ဤ induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် (AAV) အားဖြင့် NAc အတွက် virus သယ်ဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုတုနိုင်ဘူး။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ AAV-mediated overexpression နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များတစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏သက်သေအထောက်အထားများပြသ အဆိုပါ NAc သို့ AAV-အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း (GFP) ၏တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချုပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပါရာဒိုင်းမဟုတ်ပြုလေ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်မှုနောက်ထပ် AAV-GFP အမျိုးသမီးနှင့်အတူ mated ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ intromission အပါအဝင်တောင်ပေါ်၏အချိုးအစားအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် AAV-ΔFosBအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲအထီး copulatory ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသသည်။ ဤရလဒ်သည်ဤကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်သဘာဝကလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ထောကျပံ့များနှင့်ΔFosBရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ endogenous လုပ်ရပ်များသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, အ mesolimbic dopamine စနစ်၏ activation အတွက်ဘီးပြေးအပြုအမူသို့မဟုတ်နျဆာပသင်ယူမှုရလဒျမြားနှငျ့ persistent ပွောငျးလဲနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ (NAc) (Becker က et al ။, 2001, di Chiara et al ။, 1998, Harris က et al ။, 2007, Kumar က et al ။, 2005, Meisel & Mullins, 2006, Nestler, 2008, Olausson et al ။, 2006, Perrotti et al ။, 2008, ပီယပ် & Kumaresan, 2006, ဝံပုလွေ et al ။, 2004) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲ dendritic ကျောရိုး၏အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဒီအတွေ့အကြုံကိုအခြေပြု plasticity (၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းAllen က et al ။, 2006, Lee က et al ။, 2006, Li et al ။, 2003, Meisel & Mullins, 2006, Norrholm et al ။, 2003, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 2004), အမူအကျင့်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေစဲထားပြီးရှည်လျားပြီးနောက်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သော (McClung & Nestler, 2008, Meisel & Mullins, 2006, ဝံပုလွေ et al ။, 2004).
အဆိုပါကူးယူအချက်ΔFosBကအမူအကျင့်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံများမှနောက်ဆက်တွဲကတော့အမြဲတည်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ (ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကောင်းသောသမ္မတလောင်းစေမော်လီကျူးဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်Chen က et al ။, 1997, Chen က et al ။, 1995, Colby et al ။, 2003, Doucet et al ။, 1996, မျှော်လင့်ချက် et al ။, 1994, Kelz et al ။, 1999, McClung & Nestler, 2003, McClung et al ။, 2004, McDaid et al ။, 2006, Nakabeppu & Nathans, 1991, Nestler, 2008, Nye et al ။, 1995, Olausson et al ။, 2006, Perrotti et al ။, 2008, Wallace et al ။, 2008, Werme et al ။, 2002, Zachary et al ။, 2006) ။ ΔFosBချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ splice ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် fosB က (Mumberg et al ။, 1991, Nakabeppu & Nathans, 1991) နှင့်, အပြည့်အဝအရှည် FosB ပရိုတိန်းနှင့်မတူဘဲ, ထိုခြင်းကိုΔFosB (အထပ်ထပ်ဆွအောက်ပါပရိုတိန်း၏စုဆောင်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောတည်ငြိမ်မှုရှိပါတယ်Chen က et al ။, 1997, Chen က et al ။, 1995, မျှော်လင့်ချက် et al ။, 1994, Kelz et al ။, 1999, Perrotti et al ။, 2008, Zachary et al ။, 2006) ။ အဆိုပါအရာအားဖြင့်ယန္တရားပေမယ့် fosB ကမျိုးဗီဇတနည်းမသိသောဖြစ်နေဆဲ spliced ​​သည် phosphorylation နှင့်အတူပရိုတိန်း၏ခြင်းကိုပိုပြီးယာယီသက်တမ်း FosB မိသားစုဝင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏ကြီးမြတ်သောအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်လျင်မြန်စွာ proteasomal ပျက်စီးခြင်းကနေပရိုတိန်းကာကွယ်ပေးသည် (Carl et al ။, 2007, Ulery & Nestler, 2007, Ulery et al ။, 2006) ။ အဆိုပါ postulate ΔFosBပရိုတိန်း၏စုဆောင်းခြင်း (ရေရှည်အမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာ plasticity အပေါ်အတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံစေခြင်းငှါဗီဇစကားရပ်၏ပုံစံများထုတ်လုပ်ကြောင်းMcClung & Nestler, 2008).
ကျနော်တို့ (ဦးနှောက်ထဲမှာအတှေ့အကွုံ-based plasticity တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအသုံးပြုခဲ့ကြBradley et al ။, 2005a, Bradley et al ။, 2005b, Bradley & Meisel, 2001, Bradley et al ။, 2004, Kohlert & Meisel, 1999, Kohlert et al ။, 1997, Meisel et al ။, 1993, Meisel & Joppa, 1994, Meisel et al ။, 1996, Meisel & Mullins, 2006) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အားသာချက်ဖြစ်စေလုံးဝလိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ, differential လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်မှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖော်ထုတ်နေဖြင့်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ရဲ့အတှေ့အကွုံမြား၏အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရင်က (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်မှအလားတူအဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်၏ာင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကရလဒ်တွေကိုထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းပြသကြBradley et al ။, 2005b, Bradley & Meisel, 2001, နန် & ကြယ်, 2006, Cadoni & Di Chiara, 1999, မျှော်လင့်ချက် et al ။, 1992, Kelz et al ။, 1999, Kohlert & Meisel, 1999, ပီယပ် & Kalivas, 1995, ပီယပ် & Kalivas, 1997a, ပီယပ် & Kalivas, 1997b, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 1999a) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက (ထို NAc ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံအတွက် dendritic ကျောရိုးတိုးပွါးLee က et al ။, 2006, Li et al ။, 2003, Meisel & Mullins, 2006, Norrholm et al ။, 2003, ရော်ဘင်ဆင် et al ။, 2001, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 1997, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 1999a, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 1999b, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 2004) ။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့ΔFosB / FosB အစွန်းအထင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (အောက်ပါ NAc အတွက်ခြီးမွှောကျကြောင်းတွေ့ကြပြီMeisel & Mullins, 2006).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ FosB မိသားစုဝင်များ၏ရှည်လျားသော-တည်မြဲစကားရပ်ထုတ်လုပ်နိုင်မပေးသော, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များတူတဲ့မှΔFosBစကားရပ် manipulate ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression ပြီးနောက်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားယခင်ကထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (ကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖို့ပြသခဲ့ကြကြောင်းရင်တော့မှားမယ်အထီးဟမ်းစတားနှစ်ခု Endpoints နှင့်အတူတိုးမြှင် conditional ရာအရပျ preference ကိုလည်းတိုးလာ copulatory ထိရောက်မှုတို့အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်Bradley et al ။, 2005b, Meisel & Joppa, 1994, Meisel et al ။, 1996, Meisel & Mullins, 2006) ။ W ကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အနည်းငယ်မျှသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကိုလက်ခံရရှိအမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏ NAc အတွက်ΔFosB overexpressing အားဖြင့်ကျနော်တို့ကပိုကျယ်ပြန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိသူအမျိုးသမီးဆင်တူအပြုအမူအပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်ဒီနေရာမှာအီးအစီရင်ခံစာ။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆီးရီးယားဟမ်းစတားချားလ်စ်မြစ်မွေးမြူရေး Laboratories, Inc (ဝီလ်မင်တန်, MA) မှအသက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60 ရက်ပေါင်းမှာကိုအပ်။ , ယောက်ျားကိုနှိုးဆွတိရိစ္ဆာန်များသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခု၏နံပါတ်များအတွက်တူညီလှောင်အိမ်ထဲမှာအုပ်စုတစ်စု-သျောစဉ်တွင်အမျိုးသမီး, ပလပ်စတစ်အိတ်များ (50.8 စင်တီမီတာရှည်လျား× 40.6 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်× 20.3 စင်တီမီတာမြင့်သော) တွင်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်အခန်းတစ်ခန်းတစ် 22 နှင့်အတူ 14 ° C ၏တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်: 10 နာရီ Light-မှောင်မိုက်အချိန်ဇယား (1 အကြားပယ်ထွန်း: 30 နှင့် 11: 30 ညနေ) ။ အစားအစာနှင့်ရေတိရိစ္ဆာန်များမှမရရှိနိုင်ခဲ့ကြ ကြော်ငြာ libitum.
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာအသုံးပြုတဲ့လူအားလုံးတို့သည်လုပျထုံးလုပျနညျးကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes နှင့်အညီရှိကြ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် Purdue တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပေးထားသောဖြည့်စွက်ထုံဆေးနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်များ၏ပို့ဆောင်မှုများအတွက်နှစ်နိုင်ငံ stereotaxic ခွဲစိတ်; အမျိုးသမီးဟမ်းစတားဆိုဒီယမ် pentobarbital မေ့ဆေး (8.5 မီလီဂရမ်နှုန်း 100 gm ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, ip Nembutal) အရ ovariectomized မြန်မာနိုင်ငံသခဲ့ကြသည်။ stereotaxic ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းဦးခေါင်းရိတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်အရေပြားနှင့်ကြွက်သားပြန်ရုပ်သိမ်း။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်ကတော့ဦးခေါင်းခွံထဲမှာတူးခံခဲ့ရကာ5μL Hamilton ကပြွတ်တို့သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှောက် ventricles ၏ရှင်းလင်းရေးသေချာစေရန်တစ်ဦး2°နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထောင့်ကနေ NAc ၏အဆင့်အထိလျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးအဘို့အရာဌာန၌ထားရှိမည်အဆိုပါပြွတ်ကြိုတင်ထိုးဖို့5မိဘို့ရာအရပျ၌အကျင်းနေရစဉ်, ပြီးတော့ adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) -GFP သို့မဟုတ် AAV- ΔFosB (0.7 μL) ဖြစ်စေသည့်ပြွတ်နှင့်အတူ,7မိကျော် NAc သို့အပ်ခဲ့သည် အပိုဆောင်း5မိ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဦးနှောက်၏ contralateral ဘက်များအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။
AAV (ထိထိရောက်ရောက်အာရုံခံ transfect မှအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့တိကျတဲ့ Transgene စကားရပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Chamberlin et al ။, 1998) ။ AAV virus သယ်ဆောင်သူတို့ရဲ့ capsid ပရိုတိန်းကုတ်အင်္ကျီ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသော serotypes နေပါသည်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှု2ကျော်တစ်ဦး titer နှင့်အတူ Stratagene တစ်ဦးထံမှ AAV2 (serotype 10) အသုံးပြုသွားမည်8/ အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း (AAV-GFP) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ΔFosBနှင့် GFP (AAV-ΔFosB-GFP) နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ Construction ခဲ့သည့် AAV အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြμl။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်ΔFosB overexpression ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အဘို့အခွင့်ပြုရန်ကြိုတင်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ NAc ကအနည်းဆုံး3ရက်သတ္တပတ်သို့ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား AAV virus သယ်ဆောင် (ဆေးထိုး၏ 10 ရက်အတွင်းအကျယ်ချဲ့ဖြစ်လာကြောင်းကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင် Transgene စကားရပ်ဖျန်ဖြေပြီးတော့ကိုအနည်းဆုံး6လအတွင်းအဘို့ဤအဆင့်မှာဆက်ရှိနေသေးWinstanley et al ။ , 2007, Zachary et al ။ , 2006) ။ အရေးကြီးတာက, ထို virus သယ်ဆောင်သာအာရုံခံကူးစက်နှင့်တစ်ဦးတည်းမော်တော်ယာဉ်တာဟာထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းမရှိအဆိပ်အတောက်ထုတ်လုပ်ရန်။ ဤအ virus သယ်ဆောင်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောမြေားတှငျထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်Winstanley et al ။ , 2007, Zachary et al ။ , 2006).
အားလုံး ovariectomized အမျိုးသမီးဟမ်းစတားကြိုတင်အဓိကချို့ယွင်းတဲ့အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်ဖို့ estradiol benzoate (cottonseed ဆီ 10 ml အတွက် 0.1 μg) ၏နှစ်ခုနေ့စဉ်အရေပြားအောက်ဆုံးထိုးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 48 နာရီနှင့် 24 နာရီပေးခြင်းအားဖြင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရစေတယ်ခဲ့ကြသည် မတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်ဖို့ (cottonseed ဆီ 500 ml အတွက် 0.1 μg) 4-6 နာရီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအမျိုးသမီးအဆိုပါချို့ယွင်းသောဆေးထိုးပြီးနောက် session တစ်ခု 10-4 နာရီမိနစ်တစ်6များအတွက်လိင်ကြုံတွေ့အထီးဟမ်းစတားနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကစမ်းသပ်မှု၏ကြာချိန်စဉ်အတွင်းတစ်ချိန်ကတွဲခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးက biased conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်း (ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်Tzschentke, 1998) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ conditional ရာအရပျ preference ကိုယန္တရား (Meisel & Joppa, 1994, Meisel et al ။, 1996) အဖြူတယောက်နှင့်တယောက်မီးခိုးရောင်အခန်း (60 × 45 × 38 စင်တီမီတာ) ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဗဟိုအခန်းအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး (37 × 22 38 ×) ၏ပါဝင်ပါသည်။ အဓိကအခန်းနောက်ထပ်အဖြူအခန်းအတွက်မီးခိုးရောင်အခန်းနှင့် corncob အိပ်ယာ (Harlan Laboratories, IN) တွင် aspen အိပ်ယာ (Harlan Laboratories, IN) ကမတူညီခဲ့သညျ။ အဆိုပါ ovariectomized အမျိုးသမီးဟမ်းစတားဟော်မုန်းကြိုတင် pre-စမ်းသပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်, Post-စမ်းသပ်ဖို့ရစေတယ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ pretest စဉ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်ကြည်လင်သောဗဟိုအခန်းနေရာချခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခန်းများအတွက်ကနဦး preference ကိုတည်ထောင်ရန် 10 မိများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကျင်လည်ကျက်ဖို့အခမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအဖြူရောင်အခန်းထဲကများအတွက်ကနဦးဦးစားပေးပြသသည့်အတိုင်းအေးစက်မီးခိုးရောင်အခန်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဟော်မုန်း Prime အေးစက်၏2(အဖွဲ့များ 2-5) သို့မဟုတ်5ရက်သတ္တပတ် (Group မှ 1) ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ အေးစက်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးတိုင်းတာအမျိုးသမီး copulatory parameters တွေကို (lordosis အောင်းနေချိန်နှင့်စုစုပေါင်း lordosis ကြာချိန်) နဲ့, 10 မိများအတွက်မီးခိုးရောင်အခန်း၌အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပေးခဲ့သည်။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုစမ်းသပ်အောက်ပါတစ်ခုမှာနာရီ, အမျိုးသမီး 10 မိများအတွက်အဖြူရောင်အခန်းတစ်ဦးတည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခံယူဘဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးကထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုဟော်မုန်းရစေတယ်ဒါပေမယ့် 10 မိဘို့အသီးအသီးအခန်းတစ်ဦးတည်းထားရှိခဲ့ကြသည်။ အေးစက်၏2သို့မဟုတ်5ရက်သတ္တပတ်အပြီးတွင်တိရိစ္ဆာန်များသူတို့သည်နောက်တဖန် 10 မိများအတွက်အခန်းများကျင်လည်ကျက်ဖို့လွတ်ကြ၏ထားတဲ့အတွက် Post-စမ်းသပ်ပေးခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်အုပ်စုကြီးသားအပေါင်းတို့, Post-စမ်းသပ်မှုခုနစ်ခုရက်သတ္တပတ် Post-stereotaxic ခွဲစိတ်ပြုမိခဲ့ကြသောကြောင့်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်၏တူညီသောအဆင့်ကိုအတူယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များ၏5အုပ်စုများကဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာရှိခဲ့သည်: တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးအပြုသဘောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်နှစ်နိုင်ငံ AAV-GFP လက်ခံရရှိပြီးအထီး (Group မှ 5, ဎ = 1) နဲ့ 8 အပတ်စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဒဿနိကဗေဒပေးတော်မူ၏။ နှစ်ဦးကအနှုတ်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုများ2ပတ်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပေးထားသောနှင့် AAV-ΔFosB (Group မှ 2, ဎ = 5) သို့မဟုတ် AAV-GFP (Group မှ 3, ဎ = 4) တစ်ခုခုကိုပေးခံခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ AAV-ΔFosBဖြစ်စေတစ်ဦးအပြန်အလှန်ထိုးနဲ့အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွမ်း2ရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များရှိကြ၏ (Group မှ 4, ဎ = 7) သို့မဟုတ် AAV-GFP (Group မှ 5, ဎ = 7) ။
ယခင်သုတေသန (လိင်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးဟမ်းစတားသူတို့ရဲ့လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမိတ်ဖက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်၏ copulatory ထိရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုပြတော်မူပြီBradley et al ။, 2005b) ။ ဤစစ်ဆေးမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် (အဖွဲ့များ2နှင့် 4) ၏5ရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏အုပ်စုနှစ်စုမှအခွအေနေအရပျကို preference ကို Post-စမ်းသပ်အောက်ပါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ပေးထားခဲ့သည်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရစေတယ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 10 မိစမ်းသပ်စဉ်အတွင်းတစ်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးဟမ်းစတားအမျိုးသမီးရဲ့အိမျလှောင်အိမ်မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်စမ်းသပ် session တစ်ခုအကြာတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အထီးများက (သုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်) တောင်ပေါ်နှင့် intromissions အရေအတွက်အဖြစ် intromission အပါအဝင်စုစုပေါင်းတောင်ပေါ်၏အချိုးအစား (နှုန်းမှာ hit) ကိုဗီဒီယိုတိတ်ခွေကနေဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
Immunostaining ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးတည်နေရာနဲ့ပရိုတိန်းစကားရပ်၏ခန္ဓာဗေဒအတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးအားအတည်ပြုရန်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး Sleepaway တစ်ခုအလွန်အကျွံ (0.2 ml ကို ip, ဝိန်း Fort Dodge Laboratories, ဝိန်း Fort Dodge, အိုဝါ) ပေးထားသောနှင့် intracardially (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 ml)2MM PBS အတွက် 50% paraformaldehyde အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်4မိဘို့ 25 MM ဖော့စဖိတ် buffered ဆား (PBS) နဲ့ perfused ခဲ့ကြသည် 20 မိ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 ml) သည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနေ့ချင်းညချင်း PBS အတွက် 4% sucrose ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာထည့်ထား 10% paraformaldehyde အတွက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်4နာရီများအတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ သာနှစ်နိုင်ငံ AAV-GFP လက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ 40 MM PBS ပေါင်း 25% bovine သွေးရည်ကြည် albumin (BSA) (လက်ဆေးကြားခံ) သို့အေးစက်နေတဲ့တစ်ရှူးများထံမှဖြတ်အမှတ်စဉ် Coronal အပိုင်း (0.1 μm) ရှိခဲ့ပြီးတော့ဆလိုက်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်%5နှင့်အတူနေတုန်းပဲစိုစွတ်သောအနေဖြင့် coverslipped glycerin အတွက်ဎ-propyl galate ။ နှစ်နိုင်ငံ AAV-ΔFosBလက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များအေးစက်နေတဲ့တစ်ရှူးများထံမှဖြတ်အမှတ်စဉ် Coronal အပိုင်း (40 μm) ရှိခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့ရေဆေးကြားခံအတွက်3မိဘို့ 10 ကြိမ်နှင့်ဆေး။ AAV-ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များသာΔFosBစကားရပ်များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ΔFosB / FosB မူလတန်း antibody ကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: မှာလက်ဆေးကြားခံအတွက် (1 10000, SC-48 Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ Inc ကို, Santa Cruz,, CA) ပေါင်း 0.3% ထရီ-X ကို 100 ထို့နောက်အခန်းတစ်ခန်း 24 နာရီများအတွက်အပူချိန်နှင့်4နာရီများအတွက်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 24 သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကသာအနည်းငယ်မျှသာ endogenous ΔFosB / FosB အစွန်းအထင်းကိုထုတ်လုပ်အဖြစ်မူလတန်း antibody ကိုဒီအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ မူလတန်း antibody ကိုအတွက်ပေါက်ဖွားအောက်ပါကဏ္ဍများကိုရေဆေးကြားခံအတွက်3မိဘို့ 10 ကြိမ်နှင့်ဆေးခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်အခန်းအပူချိန် (45: 1, Vector, Burlingame,, CA) မှာ 200 မိဘို့ biotinylated-အလယ်တန်း antibody ကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး။ အဆိုပါကဏ္ဍများထို့နောက် Alexa fluor3conjugation (10, Molecular စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Eugene, OR 594) streptavidin နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးမခံရမီရေဆေးကြားခံအတွက် 1 မိဘို့ 500 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ ဒီပေါက်ဖွားနောက်တွင်ထိုကဏ္ဍများကိုရေဆေးကြားခံအတွက်3မိဘို့ 10 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့ကြပြီးတော့ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် glycerin အတွက် 5% n-propyl galate နှင့်အတူနေတုန်းပဲစိုစွတ်သောအနေဖြင့် coverslipped ။
ဆလိုက်နေတဲ့ Leica DFC4000 ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ coupled ချောင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦး Leica DM500B အလင်းဏုအားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်း၏ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ကိုဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကို Serial အဆိုပါ NAc အတွက်ဆေးထိုးနေရာချထားနေရာချထားရန်ချောင်း microscopy အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်များမှကဏ္ဍများကိုဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်များနှင့်လည်းစကားရပ်၏အကြီးဆုံးအချင်း၏ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာ caudal ပြန့်ပွားဖို့ rostral ကိုရှာဖွေဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်အဲဒီကဏ္ဍများအတွင်း FosB စွန်းဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုထံမှ ImageJ အတွက်ရေတွက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အနီးစပ်ဆုံးဆဲလ်အရေအတွက်ရရှိရန်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်သကဲ့သို့, stereological နည်းလမ်းများအသုံးမခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားများ၏ NAc အတွက်ΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ်ကမကထပြုခဲ့ overexpression အချိန်သင်တန်း
တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးကသီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ΔFosB overexpression နေတဲ့အချိန်သင်တန်းကိုရှာဖွေပိုင်းတွင်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ3(ဎ = 5),6(ဎ = 6) မှာΔFosBထုတ်ဖော် analysis နှင့်9(ဎ = 2) တပတ်အချိန်မှတ်3ရက်သတ္တပတ် stereotaxic ခွဲစိတ်6နှင့်9မှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သောΔFosB overexpression တစ်ဦးအဆင့်ကိုထုတ်လုပ် post ကြောင်းထင်ရှား ရက်သတ္တပတ် stereotaxic ခွဲစိတ် post ။ ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်များအားဖြင့်နျူကလီးယားခဲ့, ဒါပေမယ့်လည်း cytoplasm တှငျတှေ့နှင့်အချို့သော overexpressing ဆဲလ်ပင် dendrites ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုသင်တန်းစမ်းသပ်မှုဖွဲ့စည်းသောတဆယ်တိရစ္ဆာန်များ၏လေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ပြန့်နှံ့တစျခုသောအ rostral NAc core ကိုဗိုင်းရပ်စ်ထိုး, ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောကိုးတိရိစ္ဆာန်များ caudal ဆေးထိုးနေရာချထားမှုကိုယင်း caudal core ကို၌ခုနစ်ခဲ့, နှင့် NAc ၏ caudal shell ကိုနှစ်ခု။ အဆိုပါ caudal core ကိုအတွက်ထိုးဆေးခြောက်ဟာ BNST သို့ caudally ဖြတ်ကျော်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးတည်းသာယင်း caudal shell ကိုထိုး၏, ထို BNST သို့ caudally ကူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မှတ်ဘို့ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်၏ပျမ်းမျှအကြီးဆုံးချင်းအသီးသီး 0.9, 1.2 နှင့် 1.0 ပတ်3မီလီမီတာ,6မီလီမီတာနှင့်9မီလီမီတာဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပျမ်းမျှအားချင်းကှဲလှဲတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်များနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဖြစ်မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်အောက်ပါအပြုအမူစမ်းသပ်ချက်အတွက်, အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း3ရက်သတ္တပတ်န်းကျင် post ကို stereotaxic ခွဲစိတ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ9ရက်သတ္တပတ်တဝိုက်ယဇျပူဇျောခဲ့ကြဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်တစ်ခုတသမတ်တည်းအဆင့်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ကြောင်းသေချာစေရန် stereotaxic ခွဲစိတ် post ။
AAV-ΔFosBနှင့် AAV-GFP ဗိုင်းရပ်စ်ထိုး၏ Immunohistological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုတစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ကနေဦးနှောက်အပိုင်း Serial ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုး၏ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာများအတွက် Coronal လေယာဉ်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ 12 တိရစ္ဆာန်များ၏စုစုပေါင်းကျန်နေတဲ့ဆေးထိုးအပ်အပုဒ် tracing ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်ဆဲလ်အရေအတွက်နှင့်ဆေးထိုးနေရာချထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏နှစ်နိုင်ငံΔFosBစကားရပ်များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဆေးထိုးနေရာချထားတဲ့ Coronal အပိုင်း (အတွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သော်လည်းပုံ 1), ပရိုတိန်းစကားရပ်ထိုး site မှတစ်ဦး rostral-caudal ဘဲဥပုံထဲမှာတိုးချဲ့နှင့်လည်းဆေးထိုး site မှတစ်ဦး dorsal-ventral ဘဲဥပုံထဲမှာပြန့်နှံ့။ Group မှ2ကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငါးတိရစ္ဆာန်များ၏, ထို overexperssion ဆဲလ် 70.5% ကို NAc (ပျမ်းမျှ = 16,864 ဆဲလ်တွေ, အနိမ့် quartile = 7,551 ဆဲလ်တွေ, အထက် quartile = 20,002 ဆဲလ်တွေ, interquartile အကွာအဝေး = 12,451) ရှိကြ၏။ Group မှ4ကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနစ်လုံးကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc အတွက် 65.6% ဗိုင်းရပ်စ် overexpression ပြသ (ပျမ်းမျှ = 9,972 ဆဲလ်တွေ, အနိမ့် quartile = 5,683 ဆဲလ်တွေ, အထက် quartile = 11,213 ဆဲလ်တွေ, interquartile အကွာအဝေး = 5530 ။ ) ။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်အရေအတွက်မဟုတ်ဘဲမူလတန်း antibody ကို၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ dilution ကြောင့် endogenous အစွန်းအထင်းထက်ဗိုင်းရပ်စ် overexpression ကိုယ်စားပြုသည်။
ပရိုတိန်းစကားရပ်အဆင့်ဆင့် AAV-GFP ကကမကထပြုခဲ့သို့မဟုတ် AAV-ΔFosB 12 Post-ဆေးထိုးရက်သတ္တပတ်များ။ ထိပ်တန်း။ GFP overexpression အများအားဖြင့်နျူကလီးယားခဲ့ပေမယ့်လည်းဆဲလ်များ၏ cytoplasm နှင့် dendrites မှဖြန့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အောက်ခြေ။ mimicked ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ် ...
အဆိုပါ 24 နှစ်နိုင်ငံဆေးထိုးဆိုဒ်များတဆယ်နှစ် caudally အဆိုပါ BNST သို့ပြန့်နှံ့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်ခဲ့ခြောက်လရာ၏, ထို NAc ၏ rostral core ကိုရှိကြ၏။ ကျန်ရှိနေသေးသောတဆယ်နှစ်လုံးကိုဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် caudal NAc ရှိကြ၏။ တကျိပ်နှစ်ပါးထိုးတ caudal shell ကိုခဲ့ပါတယ်နှင့် BNST သို့ caudally ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတကျိပ်တပါးသောဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် BNST သို့ caudally ပျံ့နှံ့ရှစ်ရာ၏ NAc ၏ caudal core ကို, အပေါငျးတို့သခဲ့ကြသည်။ အားလုံးထိုး (အနည်းငယ်ပိုပြီး medial အဆိုပါ anterior commissure ထက်သော NAc ၏ caudal shell ကိုအတွက်တဦးတည်းထိုးမှတပါး anterior commissure တဝိုက်ဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်ပုံ 2) ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ GFP သို့မဟုတ်ΔFosBဖြစ်စေ၏သင့်လျော်သော overexpression ပြထို့ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲသားကိုခန္ဓာဗေဒဆေးထိုးနေရာချထား၏လေ့လာမှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အားလုံးထိုးသည့် accumbal core ကိုရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသာဆေးထိုးခြင်းမရှိစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိုးဆိုဒ်များတွင်ပြုမိခဲ့ shell ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမူကား,
စမ်းသပ်ဆဲတိရစ္ဆာန်များ၏ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးနေရာချထားမှုကို၏ခန္ဓာဗေဒ localization ။ စက်ဝိုင်း AAV-GFP နေရာချထားကိုယ်စားပြုရင်ပြင် AAV-ΔFosBနေရာချထားကိုယ်စားပြုသည်။ a.5နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များအဘို့ AAV-GFP ဆေးထိုးနေရာချထားမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် (Group မှ 1) ရက်သတ္တပတ်များ။ ...
တိုးမြှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားရလဒ်များ၏ NAc အတွက်ΔFosB၏ AAV အားနည်းချက်ကို overexpression
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression ကျနော်တို့အခြေအနေများကိုရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်တိရစ္ဆာန်များ 0, 2, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏5ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်စေခံယူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စဉ်အတွင်း lordosis အောင်းနေချိန်နှင့်ကြာချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးသမီးဟမ်းစတားများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုမ lordosis အောင်းနေချိန် (Group မှ 1: 553 စက္က±7စက္က, Group မှ 4: 552 စက္က±7စက္က, Group မှ 5: 561 စက္က±7စက္က,) မဟုတ်သလို lordosis ကြာချိန် (Group မှ 1: 485 စက္က± 15 စက္က, Group မှ 4: 522 စက္က ± 10 စက္က, Group မှ 5: 522 စက္က± 12 စက္ကန့်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နေစဉ်အတွင်းမသက်ဆိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုး၏စမ်းသပ်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် GFP မဟုတ်သလိုΔFosB၏ overexpression မအမျိုးသမီး၏လက်ခံအပြုအမူအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးလုပျထုံးလုပျနညျးအနေဖြင့်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ pre-စမ်းသပ်မှုနှင့် Post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းအေးစက်အခန်း (မီးခိုးရောင်အခန်း) တွင်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုအကြားတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာ t-စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအုပ်စုများအကြားတိုးချဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ ယခင်သုတေသန (ငါးအေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအရပျကိုဦးစားပေးများတွင်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို detect လုပ်ဖို့လုံလောက်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးMeisel & Joppa, 1994, Meisel et al ။, 1996) ။ အမှန်စင်စစ်ငါးခုအေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုပေးခဲ့သည်သော NAc အတွက် GFP overexpressing အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များ၏ပါဝင်သည်ဟုအပြုသဘောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (pre-အေးစက်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတွဲမီးခိုးရောင်အခန်း post ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း t ကိုသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန် 8 ) = -3.13, P<0.05 ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအေးစက်စေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမပေးသောတိရစ္ဆာန်များသည်ဗိုင်းရပ်စ်ထိုးသွင်းခြင်းမခွဲခြားဘဲမည်သည့်အခန်းတွင်း၌မဆိုအချိန်ပမာဏကိုသိသိသာသာမပြောင်းလဲစေပါ။2အေးဆေးလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံများပေးသောအလွန်အကျွံဖိအားပေးခံရသော GFP အမျိုးသမီးများသည်နေရာထိုင်ခင်းကိုပြသခြင်းမဟုတ်ပါ၊ conditioningFosB ၏အလွန်အကျွံဖိအားပေးခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ်ခုကိုပေးသောအမျိုးသမီးများသည်ဤစာမေးပွဲကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်တွဲနေသောအခန်းတွင်သိသိသာသာအချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့သည်။ t (7) = -2.48, P <0.05 (ပုံ 3).
ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးအောက်ပါနေရာအရပ် preference ကိုအေးစက်။ ဒါကဂရပ်ဟမ်းစတားတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့မီးခိုးရောင်အခန်းများတွင်သုံးစွဲသော Pre-အေးစက်စမ်းသပ်မှု (အကြို) စဉ်အတွင်းစက္ကန့်ရဲ့ယုတ် (± SEM) နံပါတ်နှင့်အဆိုပါ postconditioning စမ်းသပ်မှု (Post ကို) ပြသထားတယ်။ ...
အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားများ၏ NAc အတွက်ΔFosB၏ AAV အားနည်းချက်ကို overexpression ရင်တော့မှားမယ်အထီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ copulatory ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်
အခွအေနေအရပျကို preference ကို Post-စမ်းသပ်အောက်ပါတစ်ပတ်ကြာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စမ်းသပ်မှု (အဖွဲ့များ2နှင့် 4) ၏5ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့ပင်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်2ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူ AAV-ΔFosBအမျိုးသမီးသိသိသာသာ AAV-GFP အမျိုးသမီး2ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ (ပြုကျော်ကိုသူတို့ရဲ့ copulatory ထိရောက်မှုတိုးတက်ပုံ 4) ။ AAV-osFosB အမျိုးသမီးများနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်လိင်မှုကိစ္စအရအမျိုးသားအမျိုးသားများ၏ထိခိုက်နှုန်း (ထုထည်ပမာဏပါ ၀ င်မှုပမာဏ) <14 ။
ရင်တော့မှားမယ်အထီးဟမ်းစတားမိတ်ဖက်များ၏ထိရောက်မှု Copulatory ။ ဒါကဂရပ်ယုတ် (± SEM) ဖြစ်စေ AAV-GFP အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသောရင်တော့မှားမယ်အထီးဟမ်းစတား၏နှုန်းမှာ (intromission အပါအဝင်စုစုပေါင်းတောင်ပေါ်၏အချိုးအစား) hit ပြသ ...
ΔFosB၏ overexpression များအတွက် AAV virus သယ်ဆောင် (ကြွက်သို့မဟုတ် mouse ကိုဖြစ်စေမော်ဒယ်စနစ်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်အသုံးပြုသွားမည်ကြောင့်ယခင်စမ်းသပ်ချက်Wallace et al ။, 2008, Winstanley et al ။, 2007, Zachary et al ။, 2006) ။ ကျနော်တို့ immunohistochemical အစွန်းအထင်းနေဖြင့်ဟမ်းစတားကဦးနှောက်ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်ပုံစံများအတည်ပြု။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ intracranial ဆေးထိုးပြီးနောက်အဖြစ်မကြာမီ3ရက်သတ္တပတ်အဖြစ်ထင်ရှားကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်သင်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်အတွက်ရက်သတ္တပတ်9မှတက် 12 ပတ်မြင့်မားသောကြွင်းသောΔFosB၏ထိရောက်သောစကားရပ်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်မှာအထီးများက copulatory interaction ကထပ်ခါတလဲလဲ (ထို NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ထိခိုက်မခံတဲ့စေပါတယ်Kohlert & Meisel, 1999, Kohlert et al ။, 1997) အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို paradig အတွက်အကျိုးဆက်များအားဖြည့်သည့်မီတာ (Meisel & Joppa, 1994, Meisel et al ။, 1996). ဤသည် dopamine sensitive ကအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံ၏ရလဒ်အဖြစ် mounting အထီးများကအောင်မြင်သော intromission ထိန်းညှိဖို့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏စွမ်းရည်, (တွဲဖက်တုံ့ပြန်မှုပြBradley et al ။, 2005b) ။ ကျနော်တို့ΔFosBအလားတူ overexpression အောက်ပါကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်စားသုံးမှုမှနျဆာပတုံ့ပြန်မှု (အတွင်းတိုးမြှင့်ဖို့အလားတူ, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ subthreshold လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဆက်စပ်အတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression နေဖြင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်အားဖြည့်ကြောင်းပြသကြColby et al ။, 2003, Olausson et al ။, 2006, Zachary et al ။, 2006) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၌ဤတိုးမြှင့်မယ့်အခွအေနေအရပျကို preference ကို၏ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ထင်ဟပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါt ကိုΔFosB၏မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်၏ activation မှအပြုအမူအတွက်ရေရှည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်နောက်ခံတွင် neuron plasticity နောက်ဆက်တွဲနှစ်ဦးစလုံးဖြန်ဖြေသောမှတ်တမ်း Nexus အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ΔFosBစဉ်းစားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ΔFosB၏မြင့်သောဤသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်, ထိုအခြေခံယန္တရားထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ΔFosBများစုစည်းနေခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအလွန်နည်းပါးဖော်ထုတ်မော်လီကျူးအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။ M ကΔFosB overexpressing ကြွက်၏ icroarray လေ့လာမှုများ serine / threonine cyclin မှီခို kinase-5 (Cdk5), နျူကလီးယားအချက် Kappa B က (အဲန်အက်ဖ်-κB), အချိုမှု receptor ၏ GluR2 subunit နှင့် dynorphin အတွက်တိုးညွှန်ပြ (အန်း et al ။, 2001, Bibb, 2003) ။ Cdk5 dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍသိပေမယ့်ဒါဟာ (ဤမော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များ plasticity နှင့် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုရှင်းလင်းBibb, 2003, ချောင် et al ။, 2006, Kumar က et al ။, 2005, Norrholm et al ။, 2003), နှင့် GluR2 subunits သို့မဟုတ်အဲန်အက်ဖ်-κB (Synaptic ်ပတ်သက်နေကြပြီအန်း et al ။, 2001, Nestler, 2001, Peakman et al ။, 2003) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ကျနော်တို့ကသူတို့လှုပ်ရှားမှုထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ fluctuates ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်ΔFosBဤနှင့်အခြားအလားအလာမြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပစ်မှတ်အပေါ်ကိုအာရုံပေါ်စီစဉ်ထားသည်။
အဆိုပါ NAc ၏ shell ကိုနှင့်အဓိကလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေအတွက် play ကြောင့်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ postulating တစ်ကျယ်ပြန့်စာပေ (ရှိပါသည်နန် & ကြယ်, 2006, Cadoni & Di Chiara, 1999, Perrotti et al ။, 2008, ပီယပ် & Kalivas, 1995) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ယခင်သုတေသနတသမတ်တည်း (ထို accumbens ၏အဓိကအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဆယ်လူလာသက်ရောက်မှုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်Bradley et al ။, 2005a, Bradley et al ။, 2005b, Bradley & Meisel, 2001, Bradley et al ။, 2004, Kohlert & Meisel, 1999, Kohlert et al ။, 1997, Meisel et al ။, 1993), ဒီလေ့လာမှုအတွက် NAc core ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်များအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်း။ ΔFosB overexpression ၏ခန္ဓာဗေဒအတိုင်းအတာ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုပါထိုးအမှန်ပင်ΔFosBစကားရပ်မကြာခဏ rostral BNST သို့ caudally ပျံ့နှံ့သည် NAc ၏ caudal core ကိုမှပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရသော်လည်းကြောင်းညွှန်ပြ။ အဆိုပါ caudal NAc နှင့် rostral BNST ဆက်ဆက်ခန္ဓာဗေဒကွဲပြားအရေးပါသော်လည်းနှစ်ဦးစလုံးဒေသများစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များမှ key ကို mechanistic ဒြပ်စင် (ဥပမာအတော်များများ modulate အဖြစ်သူတို့သေချာပေါက် function ကွဲပြားနေကြသည်မဟုတ် Koob et al ။ , 2004) ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားကျွန်တော်တို့ရဲ့ microdialysis လေ့လာမှုများအတွက် (Kohlert et al ။, 1997), ကျနော်တို့ Basal dopamine အဆင့်ဆင့်၏အသုံးအနှုန်းများအတွက် caudal NAc ရှိသူတို့ထံမှ rostral BNST စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကိုခွဲခြားဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ယောက်ျား, ဒါမှမဟုတ် dopaminergic afferent innervation ၏ပုံစံများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမှ dopamine တုံ့ပြန်မှုမှတ်ချက်ချသည်။ အဲဒီအစားအတိုင်းအတာများပြဿနာအဖြစ် BNST သို့ကူးစက်ပြန့်ပွားကြည့်ရှုခြင်းထက်အဲဒီရလဒ်များ NAc နှင့် BNST အကြားတစ်ဦး functional စဉ်ဆက်၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့။
ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်ΔFosB၏ overexpression ပြခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ် လုံလောက်သော တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှင့်အတူ copulatory interaction ကမြှင့်တင်ရန်, ကΔFosBစကားရပ်တွင်ရှိမရှိမသိရသေးမှ လိုအပ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏, ဤအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များများအတွက်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများမျိုးဗီဇအပေါ် AP-1 ဒေသ binding မတိုင်မီယှဉ်ပြိုင်ΔFosBနှင့်အတူ heterodimerizing အားဖြင့်ΔFosBကမကထပြုခဲ့ကူးယူလျော့ကျသည့် AAV-ΔJunDဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, (အသုံးပြုသွားမည်ပါပြီWinstanley et al ။, 2007) ။ ΔFosBကမကထပြုခဲ့ကူးယူ knockdown ဖို့ AAV-ΔJunDအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ΔFosBကျနော်တို့ကဒီမှာတင်ဆက်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဖြည့်တံ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွေ့အကြုံ, အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိထားသောအမူအကျင့် plasticity ဘို့လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဆိုပါΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲ activation နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာ plasticity ဖြစ်စေတဲ့နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ΔFosB၏ knockdown သည်ဤသက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်သင့်တယ်။
ကျနော်တို့အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း, အေးစက်နှင့်တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကူအညီမန်ဒါ Mullins, အမျိုးသမီး Melissa McCurley နှင့်ချယ်လ်ဆီး Baker ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ DA13680 (RLM) နှင့် MH51399 (EJN) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Allen က PB, Zachary V ကို, Svenningsson P ကို, Lepore AC အ, Centonze: D, ကော်စတာကို C, ရော့စီက S, Bender, G, ချန်, G, Feng တို့ဂျေ, Snyder GL, ဘာနာ, G, Nestler EJ, ယန် Z ကို, Calabresi P ကို, Greengard P. ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍ dopamine-mediated plasticity အတွက် spinophilin နှင့် neurabin သည်။ neuroscience ။ 2006;140: 897-911 ။ [PubMed]
Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 3236-3241 ။ [PubMed]
Berton အို Covington သူ, 3rd, Ebner K ကို Tsankova မိုင်, Carl TL, Ulery P ကို, Bhonsle တစ်ဦးက, Barrot M က, Krishnan V ကို, Singewald GM က, Singewald N ကို, Birnbaum က S, Neve RL, Nestler EJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် periaqueductal မီးခိုးရောင်အတွက် deltaFosB ၏ induction တက်ကြွဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007;55: 289-300 ။ [PubMed]
Bibb ဂျေအေ။ အာရုံခံအချက်ပြ, ပလတ်စတစ်, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် Cdk5 ၏အခန်းက္ပ။ Neurosignals ။ 2003;12: 191-199 ။ [PubMed]
Bradley KC, Boulware ကို MB, Jiang H ကို, Doerge RW, Meisel RL, Mermelstein PG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2005a;4: 31-44 ။ [PubMed]
Bradley KC, Haas AR, Meisel RL ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Mesocricetus auratus) အမျိုးသားများနှင့်အတူ copulatory interaction ကအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏ sensitized သက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005b;119: 224-232 ။ [PubMed]
Bradley KC, Mullins AJ, Meisel RL, Watts VJ ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 အဲဒီ receptor-mediated သိသိ amp ထုတ်လုပ်မှုပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2004;53: 20-27 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, ကြယ် JR ။ က c-Fos နှင့် deltaFosB စကားရပ် differential သည့်နျူကလိယ၏ကွဲပြားငျဒသေထဲမှာပြောင်းလဲနေကြသည်ကိုကင်း-sensitized ကြွက်များတွင် shell ကို accumbens ။ neuroscience ။ 2006;137: 773-780 ။ [PubMed]
Cadoni ကို C, Di Chiara G. အအပြန်အလှန်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ sensitized ကြွက်များတွင် shell ကိုနှင့်အဓိကနှင့် dorsal caudate-putamen အတွက် accumbens နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine တုန့်ပြန်အတွက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ neuroscience ။ 1999;90: 447-455 ။ [PubMed]
Chamberlin NL, ဒူ B က, က de Lacalle S က, Saper သမဝါယမ။ Recombinant adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို: Transgene စကားရပ်နှင့် CNS အတွက် tracing anterograde ကျေးရွာအုပ်စုများအတွက်သုံးပါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998;793: 169-175 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ ။ နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် deltaFosB ၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 4933-4941 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995;48: 880-889 ။ [PubMed]
ချောင် ZH, ဖူ AK, IP နယူးယော့။ Cdk5 ၏ Synaptic အခန်းကဏ္ဍ: ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သက်ရောက်မှုနှင့် neurodegenerative ရောဂါများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006;50: 13-18 ။ [PubMed]
di Chiara, G, Tanda, G, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Bassareo V ကို, Carboni အီး Homologies နှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် dopamine ဂီယာအပေါ်တစ်ဦးသမားရိုးကျစစ်ကူ (အစားအစာ) ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ယန္တရား၏စကားပြန်မူဘောင်။ Adv Pharmacol ။ 1998;42: 983-987 ။ [PubMed]
Doucet JP, Nakabeppu Y ကို, Bedard PJ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ, Jasmine BJ, ချန် JS, Iadarola MJ, စိန့်-ဂျင်း M က, Wigle N ကို, Blanchet P ကို, Grondin R ကို, Robertson က GS ။ dopaminergic neurotransmission အတွက်နာတာရှည်ပွောငျးလဲသည့်ကြွက်နှင့်မျောက် striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက် deltaFosB တူသောပရိုတိန်း (များ) ၏တစ်ဦး persistent မြင့်ထုတ်လုပ်ရန်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1996;8: 365-381 ။ [PubMed]
Harris က GC, ဒေါ့မွန်က M, Wimmer M က, Mague SD က, အနျူကလိယ accumbens အတွက် FosB ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အဓာတ်လှေကားအတင်းအဓမ္မကင်း abstinence စဉ်အတွင်းဆုလာဘ် function ကိုအတွက်မတူကွဲပြားအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပတျသကျ။ neuroscience ။ 2007;147: 583-591 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kohlert JG, Meisel RL ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုမိတ်လိုက်-related နျူကလိယအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens sensitizes ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999;99: 45-52 ။ [PubMed]
Kohlert JG, ရိုဝီက RK, Meisel RL ။ ယောက်ျားထံမှ Intromissive ဆွအမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏ midbrain အတွင်း fluoro-ရွှေဖော်ထုတ်အာရုံခံထံမှ extracellular dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 1997;32: 143-154 ။ [PubMed]
Koob gf, Ahmed က SH, Boutrel B ကို, ချန်လုပ် SA, Kenny PJ, Markou တစ်ဦးက, O'Dell LE, Parsons LH, Sanna PP ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် Neurobiological ယန္တရားများ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2004;27: 739-749 ။ [PubMed]
Lee က KW ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006;103: 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်မြဲစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏တည်နေရာနှင့်-putamen caudate ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28: 1082-1085 ။ [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ Neuroplasticity ပြောင်းလဲဗီဇစကားရပ်ကကမကထပြုခဲ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 3-17 ။ [PubMed]
Meisel RL, စခန်း DM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral striatal dopamine တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1993;55: 151-157 ။ [PubMed]
Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA ။ ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအောက်ပါအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994;56: 1115-1118 ။ [PubMed]
Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA, ရိုဝီက RK ။ Dopamine အဲဒီ receptor ရန်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါ conditional ရာအရပျ preference ကို attenuate ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1996;309: 21-24 ။ [PubMed]
Meisel RL, Mullins AJ ။ ဆယ်လူလာယန္တယားများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ: အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံကို။ ဦးနှောက် Res ။ 2006;1126: 56-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mermelstein PG, Becker က JB ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် PACE copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum အတွက် extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995;109: 354-365 ။ [PubMed]
Mumberg: D, Lucibello FC အသင်း, Schuermann M က, function ရန်ပရိုတိန်းကုဒ်သွင်း differential ထုတ်ဖော်ပြောဆို mRNAs အတွက် fosB မှတ်တမ်းရလဒ်များ Muller R. အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ။ မျိုးဗီဇ Dev မှ။ 1991;5: 1212-1223 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2: 119-128 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: deltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန် B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Norrholm SD, Bibb ဂျာ Nestler EJ, Ouimet CC ကို, တေလာ JR, နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2003;116: 19-22 ။ [PubMed]
Oades RD, Halliday GM က။ Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology ။ 1 ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1987;434(2): 117-165 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Damsma, G, Wenkstern: D, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995;693: 21-30 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနျူကလီးယပ်အတွက်ဦးစားစက်ခေါင်းများနှင့် extracellular dopamine အတွက် sensitized တိုးထုတ်လုပ်အထပ်ထပ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ကြွက်များ၏အခွံ accumbens ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;275: 1019-1029 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သော psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997a;25: 192-216 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းစိတ်ကြွဆေး dopamine ဖြန့်ချိသောယန္တရားကိုအထူးပြု။ J ကို neuroscience ။ 1997b;17: 3254-3261 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kumaresan V. အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်က: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း? neuroscience Biobehav ဗျာ 2006;30: 215-238 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2001;39: 257-266 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 8491-8497 ။ [PubMed]
စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999a;11: 1598-1604 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခမော်ဖင်းအကိုက်အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ neocortex အတွက်အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပွောငျးလဲ။ synapses ။ 1999b;33: 160-162 ။ [PubMed]
Tzschentke TM အလိုအလျောက်။ မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, မကြာသေးမီတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း။ prog Neurobiol ။ 1998;56: 613-672 ။ [PubMed]
Ulery PG, Nestler EJ ။ Ser27 phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;25: 224-230 ။ [PubMed]
ဝံပုလွေ ME, Sun က X ကို, Mangiavacchi S က, Chao SZ ။ Psychomotor စိတ်ကြွဆေးနှင့်အာရုံခံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 61-79 ။ [PubMed]